Khipha futhi Ukhulule! Ikotishi - Lithandekayo, Ichibi elizimele - I-Airbnb
Khipha futhi Ukhulule! Ikotishi - Lithandekayo, Ichibi elizimele
Boonville, New York, i-United States
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Tep
Indlu ethokomele echibini langasese. Ama-kayak, izikebhe, izikebhe, amadokhu antantayo - zonke izinsiza ozidingayo ukuze ube neholide elifanele lechibi. Ayikho i-inthanethi kodwa izindawo ezishisayo nezinsiza zeselula ziyasebenza. Ama-DVD amaningi ongawabuka, izincwadi okufanele zifundwe nemidlalo ezodlalwa.
Ikotishi elibheke echibini elithandekayo elisendaweni engaphansi kwe-Adirondacks.
Acwebile acwebile, amanzi aphuma entwasahlobo ahlala eyizinga lokushisa elilungele ukubhukuda. Idokodo elintantayo elinebhodi lokuntywila kanye nolwandle olunesihlabathi. Indlu yesikebhe enesikebhe sokugwedla, ama-kayak, isikebhe, isikebhe esigwedlwayo namathoyizi amanzi.
Ikotishi linamakamelo okulala ama-3 (1 - umbhede oyi-double/futon, 2- umbhede ophindwe kabili nombhede ophindwe kabili (futon), 3rd - umbhede ophindwe kabili nombhede owodwa. Igumbi lokuhlala linosofa/futon futhi kunompheme wokulala, ohluziwe. Igumbi lokugezela elingu-1. Indawo yokucima umlilo yangaphakathi nangaphandle kanye nomgodi womlilo phansi eduze kwechibi le-S'mores kanye nezindawo zomlilo zakusihlwa. I-grill nezindawo eziningi ezingaphandle zokuzihlalela. I-inthanethi engenantambo enesivinini esiphezulu. I-TV (ayikho i-reception noma ikhebula) kodwa isidlali se-DVD kanye amamuvi amaningi. Ikhishi elihlome ngokugcwele eline-microwave, umenzi wekhofi, ne-blender. Alikho iwasha/isomisi. Indawo yokuwasha edolobheni.
Ikotishi lisechibini elizimele edolobheni laseBoonville, NY. Amanye amachibi aseduze okushushuluza emanzini noma ukuzijabulisa kwesikebhe esinemoto. Amamayela angu-35 ukuya e-Old Forge enegalofu elincane, ipaki lamanzi, inkundla yemidlalo yeshashalazi. Idolobha elihle, elinezivakashi epaki ye-Adirondack. Ukuhamba ngezinyawo, igalofu, ithenisi konke okuseduze.
4.56 out of 5 stars from 30 reviews
4.56 · 30 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Boonville namaphethelo